Kukosha kwemiti kupinza | Green Renewables
ari ámiti ivo vakakosha ku tora CO2 uye kusvibisa mweya watinofema.
Nhasi kugona kwenzvimbo dzesango sevagadziri ve oksijeni uye yakawanda yepasi inotemwa nemasango kana kukuvara masango, masango uye ecosystems ane hombe miti nemimwe michero.
Kune yedu nzanga zviri nyore kwazvo uye nekukurumidza kugadzira huwandu hwakawanda hwe CO2 Asi miti nezvisikwa zvipenyu zvine nguva yakaoma kutora magasi akawanda kudaro.
Wepakati muti wehukuru hwakanaka unogona kuchenesa pakati pe20 uye 45 kg yemhepo mugore rimwechete zvichienderana nerudzi.
Hekita yega yega yesango inogona kuve nemiti ingangosvika chiuru, asi zvinofanirwa kutariswa kuti miti inotora yakawanda CO1000 kana ichinge ichikura painosvika kune vanhu vakuru kugona kwayo kunodzikira zvishoma.
Munhu wega wega anoburitsa angangoita 3,9 matani eCO2 pagore, saka zvinotora anopfuura ma9000 mamirioni mahekita emasango kuti akwanise kutora iwo huwandu hweEC2.
Asi zvinopesana zviri kuitika kubva kumamirioni emahekita e masango anomira papasi saka muyero wezvakatipoteredza unogumbuka chaizvo. Chiyero hachina kunaka nekuti yakawanda CO2 inoburitswa uye diki CO2 inopinzwa.
Izvo zvakakosha kwazvo kuchengetedza masango nemasango nekuti seti yemiti nemakwenzi zvinoshanda zvirinani pamwechete kupfuura munhu wega wega.
La kutemwa kwemasango Iwe unofanirwa kumira wotanga kutemazve miti nemasango emhando dzenzvimbo kunzvimbo dzakatemwa masango. Asi zvakakoshawo kuti tidzikise kabhoni tsoka yedu.
Kusvika parizvino, miti ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekubata kusvibiswa, hapana hunyanzvi hwekutsiva kugona uku, saka tinofanira kuitarisira.
Zvakanyanya kuipa mhepo iyo yatinofemera pasi ndiyo ichave iyo hupenyu hwehupenyu izvo isu tichava nazvo uye hutano hwevanhu huchawedzerwa zvakanyanya, hatifanire kukanganwa chinhu ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Tora co2 » Kukosha kwemiti kupinza